Nezvedu - Nanchang Eco Hardware Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kubva nheyo, kambani yedu yakanyanya kutarisisa kugadzirwa uye kutengeswa kwezvishandiso izvo zvinoshandiswa kune zvipfeko, shangu, ngowani, mabhokisi, mabhegi nevamwe. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira mhando dzese dzematagi, zvinyorwa zvesimbi, mabhatani esimbi, mabheji esimbi, machira, mavara ezvipfeko, zvigamba zveganda, mabhegi evharo, echirimo mabhureki, zvipfeko zvemukati, mapakeji nezvimwe.
Kambani yedu ine yekumhanyisa uye kutumira kunze kodzero pamwe nekupararira kwepasirese uye ruzivo rwekunze. Tinogona kupa yakazara logistic sevhisi, warehousing uye ekisipoti sevhisi. Yepamberi internet yekubhuka masystem anovimbisa yakanyanya kushanda uye chaiyo data kugadzirisa uye kudzivirira chero kunetseka kwevatengi.
Fekitori yedu iri muShanghai. Nzvimbo yese inenge 3500 mativi emamita. Uye isu zvakare tine hofisi yebazi iri muNanchang, Jiangxi. Tine vashandi vanosvika zana nemakumi masere, vanosanganisira makumi maviri nemashanu emusana avo vari ma technologist kana vanhu vanoita zvekutsvaga nekusimudzira. Kambani yedu inogona kupa zvakagadziriswa dhizaini uye akakosha mazano kune vatengi.
Kambani yedu ine yakanyanyisa kuomarara mhando kudzora system. Isu tinogara tichiomerera pane 100% yemhando yekuongorora zvisinei nezviwanikwa mbishi kana zvigadzirwa zvakapedzwa. Yedu yakasarudzika mhando uye sevhisi yakanaka yakahwina chivimbo uye kuyemurwa kubva kune vakawanda vatengi. Ikozvino, isu tave isu takasarudzwa chishongedzo mutengesi kune mazhinji epasi rose super koshitomu yemhando.
Nzvimbo yese inenge 3500 mativi emamita. Uye isu zvakare tine hofisi yebazi iri muNanchang, Jiangxi.
Kambani yedu ine yakanyanyisa kuomarara mhando kudzora system. Isu tinogara tichiomerera pane 100% yemhando yekuongorora zvisinei nezviwanikwa mbishi kana zvigadzirwa zvakapedzwa.
Kambani yedu ine yekumhanyisa uye kutumira kunze kodzero pamwe nekupararira kwepasirese uye ruzivo rwekunze.
We noushamwari kubvunza kubva mhiri kwemakungwa uye epamba vatengi. Tichagara tichibata vese mutengi zvakanyanya uye nekushinga uye kunyangwe isu wee tichawana kutarisisa kwedu kukuru.